Xoghayaha Dawladda ee Hawlgabka iyo Caafimaadka Shaqada Laurent Pietraszewski ayaa maanta daaha ka qaaday olole wacyigelin ah oo ay samaysay INRS, hawl wadeenka CNAM ee ka hortagga khatarta shaqada, si kor loogu qaado wacyiga dhalinyarada ee qalabka ilaalinta shakhsi ahaaneed ee deked badbaado leh, taas oo qayb ka ah safarka tababarka. Xarunta tababarayaasha dhismaha ee Brétigny-sur-Orge iyadoo uu joogo Stéphane Pimbert, agaasimaha guud ee INRS.
Iyadoo inta badan shilalka goobta shaqada ay 2,5 jeer ka badan yihiin kuwa ka yar 25 jir marka loo eego dhammaan shaqaalaha, dhalinyarada ayaa si gaar ah loo soo bandhigay.
Le 4-aad Qorshaha Caafimaadka Shaqada, kaas oo dejinaya qorshaha caafimaadka shaqada ee sanadaha 2021-2025, ayaa ka hortagga shilalka dhalinyarada iyo kuwa wax baranaya ka dhigtay ujeeddada mudnaanta leh.
Xaaladdan oo kale, dadaallada lagu tababarayo laguna wacyigelinayo caafimaadka iyo badbaadada shaqada, oo ay ku jiraan xirashada saxda ah ee wadajirka ah iyo qalabka ilaalinta shaqsiga, ayaa la xoojiyay.
INRS, iyada oo loo marayo ololaha cusub ee lagu horumarinayo dhaqanka wanaagsan ee maanta la bilaabay, waxay xasuusataa, si ay u noqoto mid waxtar leh, qalabka ilaalinta shakhsi ahaaneed (PPE) waa in la waafajiyaa oo si sax ah loo isticmaalo.
Kor u qaadista wacyiga dhalinyarada ee khataraha shaqada Febraayo 21, 2022Tranquillus
READ Ardayda: dooro barnaamijka barashada shaqada
horeKoontada tababarka shaqsiyeed: wicitaanada taleefanka, SMS, ka digtoonow isku dayga khiyaanada
socdaXiisadaha qoritaanka: hirgelinta khariidado maxali ah si loo daboolo baahiyaha ganacsi